Umthandazo wokufumana izinto ezilahlekileyo. ? Kwaye kwabiwa [San Antonio]
Umthandazo wokufumana izinto ezilahlekileyo Kubaluleke kakhulu kuba amaxesha amaninzi sizifumana sikwiimeko ezinzima zizo eziye zalahleka kuthi njengezitshixo zendlu okanye izinto ezibaluleke kakhulu njengemali.
Inyani yile yokuba ukuba nalo mthandazo unokusinceda singafumani nje into ebilahlekile kodwa sizole phakathi kwayo yonke inkqubo yokukhangela kuba inokuba ngumzuzu wexinzelelo apho umonde nokuzola kuqhele ukusilela khona kodwa Ngomthandazo sinokuphinda sicinge kwaye sisebenze ngokufanelekileyo.
1 Umthandazo wokufumana izinto ezilahlekileyo Yintoni le saint?
2 1) Umthandazo kuSan Antonio uphulukene nezinto
3 2) Umthandazo wokufumana izinto ezilahlekileyo iSan Cucufato
4 3) Umthandazo wokufumana izinto ezilahlekileyo okanye ezibiweyo
4.1 Ngaba ndingakhanyisa ikhandlela xa ndithandaza?
4.2 Ndingawenza nini umthandazo ukuze ndifumane izinto ezilahlekileyo?
Umthandazo wokufumana izinto ezilahlekileyo Yintoni le saint?
San Antonio Uyaziwa ngabaninzi njengengcwele yezinto ezilahlekileyo kuba yena, xa wayesaphila, wayengqina ngokungqalileyo kwezinye iziganeko ezazinzima kakhulu kwisandla somntu.
Ubomi bale saint ngummangaliso ukusuka ekuqaleni ukuya esiphelweni kwaye, kuyo yonke le nto, waba ngumncedi omkhulu wabantu abajamelene neengxaki zokuphulukana neempahla ezithile.
Omnye umthandazo onokuthi wenziwe kwezi meko kukuSan Cucufato nanjengokuba lo wayengumshumayeli wevangeli kwiindawo ezikude apho kungekho namnye owaba nesibindi sokuya khona.
Imithandazo yaqala ukufakwa kuye ngenxa yokuba, kunye neSan Antonio, waba ngumncedi onamandla kwaye iimpendulo zakhe zichanekile kwaye zichanekile kangangokuba bayamangaliswa.
1) Umthandazo kuSan Antonio uphulukene nezinto
«U-Saint Anthony, umkhonzi ozukileyo kaThixo, owaziwayo ngokufaneleka kwakho kunye nemimangaliso enamandla, sincede ukufumana izinto ezilahlekileyo; sinike uncedo lwakho kuvavanyo, ukhanyise iingqondo zethu ekufuneni ukuthanda kukaThixo.
Sincede sifumane kwakhona ubomi bobabalo esachithwa sisono sethu, usikhokelele kwilungelo lobuqaqawuli obabuthenjiswe nguMsindisi.
Oku sikucela kuKristu iNkosi yethu.
Lo mthandazo unokwenziwa nangaliphi na ixesha okanye imeko kuba uSan Antonio uhlala eziqwalasele izicelo zabantu bakhe kwaye ukuba ufuna ummangaliso othile impendulo iza ngokukhawuleza.
Khumbula ukuba imithandazo inamandla kwaye iba sisixhobo esifihlakeleyo esinokusisebenzisa nanini na xa sifuna ngoba eyona nto ifunwayo kukuba nokholo.
2) Umthandazo wokufumana izinto ezilahlekileyo iSan Cucufato
Ndilahlekile (utsho elahlekileyo), Ndifuna ukuyibuyisela kwakhona, kwaye ukuba andifanga ngaphambili kwaye ngale nto ndiyenza iibhola zakho, uSan Cucufato, kwaye iboshwe isele, kude kube (utsho elahlekileyo) ezandleni zam ndiyabuya. Ameni ”
I-San Cucufato yenye yeengcwele ezinamandla esinokuthi siphendukele kuzo amaxesha okuphelelwa lithemba kunye nosizi xa singafumani zinto zethu.
Nokuba kunzima kangakanani oko sikucelayo, le yimithandazo enamandla enokwenziwa nangaliphi na ixesha.
3) Umthandazo wokufumana izinto ezilahlekileyo okanye ezibiweyo
«Owu Thixo ongunaPhakade noBawo Onamandla, Nkosi yezulu nomhlaba, othe ngoYesu Krestu, uNyana wakho, uzibonakalise kwabangamahlwempu kwabangabalulekanga nakwabathobekileyo. phila ngokulula kwentliziyo enqwenela iimpahla zaseZulwini.
Sivume ukuba xa sicela abantu ukuba bafikelele oko sikucelayo, isandla sakhe esinamandla uya kusihlangula ngokukhawuleza koko sikulahlekileyo okanye kubiwe kuthi:
(phinda into obuyifunayo)
Bawo siyakuncoma kwaye sikusikelela kwaye siyabulela kuba sisazi ukuba uyasimamela kwaye ukuba inceba yakho ayinasiphelo, siyakucela ukuba uziqwalasele izibongozo zethu kwaye usincede kwabo baceliweyo, ukuze, xa sithuthuzeleka ekubandezelekeni kwethu, sicamngce ngemimangaliso yamandla akho.
Siyakucela ukuba ukhulise ukholo lwethu kunye nothando lwethu, ukuze, silandele umzekelo womthandazo kunye nokuzinikela kwe-Aparicio ye-Sikelela eyonwabileyo, siya kukudumisa rhoqo.
NgoYesu Krestu iNkosi yethu. Amen. "
Lo mthandazo wokufumana izinto ezilahlekileyo okanye ezibiweyo zinamandla kakhulu.
Ilizwi likaThixo lisifundisa ukuba sithandaze njani, kwiindinyana zakhe sibona imizekelo emininzi yokholo apho, kunye nomthandazo omnye, imimangaliso emangalisayo yafunyanwa.
Yiyo loo nto kungafanelekanga ukuba siwugxothe umthandazo kuba unamandla amakhulu. Ekuphela kwento eceliweyo ukuba uthandaze ukuze ufumane impendulo eceliweyo kukwenza ngokholo, sikholwa ukuba le nto siyicelayo iya kwamkelwa.
Kukho abo basetyenziselwa ukwenza umthandazo ngeentsuku ezininzi okanye iyure ethile, kodwa inyani kukuba oku kuxhomekeke kwinto nganye ayicwangcisileyo entliziyweni yakhe, kuba yeyona nto ibaluleke kakhulu leyo.
Ngaba ndingakhanyisa ikhandlela xa ndithandaza?
Umcimbi wamakhandlela ubaluleke kakhulu kwaye impendulo yalo mbuzo nguEwe ophilayo.
Amakhandlela kuphela awanamandla kodwa ayanceda ukwenza ukuba imeko yonke ilunge ngakumbi kwaye ithathwe njengeminikelo yabo bangcwele kuba ukuyisebenzisa kufuna utyalomali oluthi, nangona luncinci, kuthathelwe ingqalelo njengesenzo Ukholo kunye nokunikezela
Ndingawenza nini umthandazo ukuze ndifumane izinto ezilahlekileyo?
Imithandazo kufuneka yenziwe nangaliphi na ixesha losuku kunye nalapho kufuneka khona.
Akukho xesha lithile Oko kufanelekile, nangona kunjalo, baninzi abathi umthandazo wasekuseni onamandla unamandla.
Ukwazi ukuthandaza naphina kwaye naphi na xa umthandazo usenza esona sixhobo sethu sihle, sinokuba semotweni, emsebenzini, endlwini yethu okanye kwintlanganiso ethile kwaye sithandaze ngengqondo nangentliziyo kwaye ukuba umthandazo wokufumana izinto ezilahlekileyo namandla nje ngento eyenziwayo ecaweni.
Umthandazo onamandla wokutsala indoda
Umthandazo onamandla wokuphupha nam